Thwebula 2048 1.4 – Vessoft
2048 – a okuthakazelisayo logic umdlalo uhlobo of puzzle. Umgomo oyinhloko umdlali ukuhambisa emabhuloki kanye nezinombolo amaqembu ehlukahlukene in a yi kuyabahlanganisa eziningi 2048. On enkundleni zikhona izikhubekiso kanye nezinombolo abhanqiwe iziphi ngamafuphi inqubo ukunyakaza futhi adale Inombolo entsha. The yinkimbinkimbi 2048 liqukethe bathuthe ngesikhathi esisodwa zonke izithiyo enkundleni eyenza umdlali kalula uthole kumile. Lo mdlalo kwenza ukuba oyifisayo ijubane izithombe, orientation enkundleni kanye nenombolo ye amaphuzu ukuqedela umdlalo. Futhi in the ekhombisa 2048 the score of game waqeda kanye irekhodi esiphezulu amaphuzu wathola.
Ukuthuthukiswa yokucabanga enengqondo umdlali
Amasethingi of the number of amaphuzu ukuqedela umdlalo
Ukuba khona impumelelo kwesigaba
Amazwana on 2048:
2048 Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... FIFA 15 Ultimate Team 1.5.5
Imidlalo Isu Arcade in the isitayela Tower Defense. In the game kukhona ezihlukahlukene enkulu imibhoshongo futhi izilo nge incazelo eningiliziwe ukwakha the ningi NEMPUMELELO NGAPHAKATHI ukuvikelwa.
English, Deutsch, 中文, Русский... Pokemon GO 0.37.1
English, Українська, Deutsch, Русский... Bona software xaxa